Ciidamada Al Shabaab oo la Wareegay Deegaanka Budbud Ee Gobolka Galguduud iyo Ciidanka Itoobiya oo isaga Baxay. – Banaadir weyne
Kadib Dagaallo iyo duqeymo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Budbud ee gobolka Galguduud ayay ciidanka Gumeysiga Itoobiya isaga baxeen deegaankaasi.
Wararka ka imaanaya Galguduud ayaa sheegaya in Kumanaan katirsan ciidamada gumeysiga Itoobiya ay isaga carareen deegaanka Bubud oo qiyaastii 70 KM ujira magaalada Ceelbuur.
Boqolaal katirsan ciidamada Xarakada SHM ayaa si buuxda ula wareegay Budbud iyo deegaanada hoos yimaad, Wariye ku sugan gobolka Galguduud ayaa SomaliMeMo khadka Taleefanka ugu sheegay in ciidamada Al Shabaab ay dagaal kula wareegeen Budbud.
Meydad iyo dhaawacyo farabadan ayay ciidanka Itoobiya xalay illaa iyo saaka ka daabulayeen deegaanka ugu dambeyntiina waxay ku baxeen wadada aadda dhanka degmada Moqakori ee gobolka Hiiraan.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya oo wata gaadiidka Gaashaaman ay gabi ahaanba faarujiyeen Budbud oo durbadiiba ay qabsadeen ciidamada Al Shabaab.
Dabayaqaadii bishii Ramadaan ayay aheyd markii sidaan oo kale ay ciidanka Itoobiya uga baxeen degmada Galcad ee gobolka Galguduud oo qiyaastii 30 KM ujirta deegaanka Budbud.
Ka Bixitaanka ciidanka Itoobiya ee Budbud iyo Galcad ayaa ka dhigan in uu fashilmay duullaankii ay kusoo qaadeen Bariga Galguduud oo ay hadda uga suganyihiin degmada Ceelbuur oo qudheeda faaruq ah kadib markii ay isaga barakaceen shacabkii ay deganaa.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada Al Shabaab ay Baaritaanno ka wadaan saldhigyadii ay baneeyeen ciidamada gumeysiga Itoobiya, Sheekh Xasan Yacquub Cali Waaliga wilaayada Islaamiga Galguduud ayaa maalmo ka hor sheegay in Itoobiyaanku baqa carar yihiin.